Dhul-gariir xoog leh oo ku dhuftay Dalka Chile
Home WARARKA Dhul-gariir xoog leh oo ku dhuftay Dalka Chile
Dhulgariir xoog leh oo cabirkiisa lagu qiyaasay 7.7 heerka cabirka dhulgarriiradda ayaa ka dhacay Koonfurta dalka Chile, waxaa la soo saaray digniin ku aadan suurtagalnimada inay dhacaan Tsunami.
Dhulgariirka ayaa ruxay 225km koonfurta galbeed ee magaalada Puerto Montt saacadu markii ay ahayd 14:22 GMT, sida ay sheegtay hay’adda Mareykanka ee la socodka dhulgariirradda, waxaana dhulgariirku uu ka dhacay badda gunteeda 15km, mana jirto wax khasaare ah oo ilaa iyo hadda la soo wariyey.
Xafiiska arimaha deg deg ah ee qaranka Chile wuxuu soo saaray digniin isagoo amray in laga qaxo dhulka xeebta ku teedsan ee gobolka Los Lagos.
“Xaaladda badbaad ahaan, waxaan amarnay in laga baxo dhulka xeebaha ee Biobio, Araucania, Los Rios, Aysen” ayaa lagu xusay digniinta.
Xarunta digniinta badgariiradda [Tsunami] ee Pacific-ga ayaa sheegtay in mowjado qatar oo gaaraya ilaa 3m in ka sareysa dhulka ay yihiin kuwa suurtagal ka noqon kara xeebaha ilaa 1000km taasi oo ka dhalanaysa dhulgariirka xooggiisa.
Dadka degan magaalada Quellon, oo u dhaw halka dhulgariirku ruxay ayaa ka mid ah kuwa hadda u baxsanaya dhul ay ku badbaadaan, sida ay sheegtay saxaafadda gudaha.
“Waxaan ku noolaa muddo 10 sano Koonfurta mana dareemin wax tan la mid a” ayuu yiri qof ka cararay gurigiisa.
Madaxeynaha Chile Michelle Bachelet ayaa fariin Twitter waxay ku tiri “Xoog badan iyo dhiirigelin ku wajahan muwaadiniita uu saameeyey dhulgariika Chile iyo meelaha kale eek a mid ah Koonfurta waxaa mar horeba la qaaday talaabooyin deg deg ah”.
Previous articleWasiirka Arrimaha Debedda Somaliland oo ka hadlay dalabka dawladda Turkigu ku doonayso in la xidho Nile Academy
Next articleWaa sidee xaaladda Wakaallada Biyaha Berbera, Maareeye Kayd oo ka xog-warramay-Daawo